I-attic isiphelile ukuhlala emazweni angaphandle. Ezikamelweni eziningi zanamuhla i- attic ekhungethweyo ihlale ikhona. Yiqiniso, njenganoma yiliphi elinye ikamelo, i-attic kufanele ifakwe amafasitela. Kunezinhlobonhlobo eziningi zokwakha okunjalo. Ukukhetha amafasitela ase-attic kumele kusekelwe ezintweni eziningana ezibalulekile.
Imiklamo yalolu hlobo isebenza ngokuyinhloko, ukuhlinzeka ngezibani zokukhanyisa. Kodwa-ke, banezinye izinhloso. Ngokuvamile, amafasitela anjalo awafakiwe hhayi kuphela ekuhlaleni, kodwa nasezintweni ezingabonakali. Esikhathini esilandelayo, nabo banesisindo kuphela. Uma ukulungiswa kuyadingeka ngabo, izisebenzi zenyukela ophahleni.
Okufanele kube yizilinganiso zamawindi we-dormer
Ukukhetha imiklamo enjalo ye-attic ilandela kuqala, iqondiswa ubukhulu bayo. Amafasitela aseMansard avame ukufakwa phakathi kwezingodo zokuphahla. Ngako-ke, ububanzi bawo kufanele bube ngukuthi bavumelane ngokukhululekile kule ndawo. Uma kungenjalo, ekwakheni ifreyimu ophahla kuyodingeka wenze izinguquko ezibizayo.
Uma ukhetha amawindi okuphakama, kufanele uqaphele izinto ezifana nenani eliphelele le-attic, ukuphakama kwezingubo, nenhloso yekamelo. Isibonelo, ekamelweni lokuphumula, ukutadisha noma igumbi labantwana e-attic, amafasitela amakhulu afaneleka kangcono. Ukuze igumbi lokulala egodini lokudlala, ungakhetha inguqulo ephansi yazo.
Engxenyeni yaseYurophu yaseRussia, e-Urals naseSiberia, ukufakwa kwezimpahla kuvame ukufakwa ebangeni elingama-80 cm komunye nomunye. Abakhiqizi bamafasitela lokhu, yiqiniso, cabangela. Ubukhulu obujwayelekile bewindi ye-dormer kungaba:
Futhi i-attic ingathengwa futhi amafasitela amaningi angama-94x140 cm, 114x118 cm no-114x140 cm. Ngezinye izikhathi ekuthengisweni kukhona imiklamo encane yalolu hlobo - kuma-55 noma angu-66 cm.
Ngokuyinhloko, ububanzi buka-78 cm bungumqondo omuhle ngisho nasesimweni somshini obanzi nobubanzi obukhulu kunama-80 cm. Kule ndaba, kufanele ucabange ukuthi yini ukuvala imifantu eseduze namafomu. Uma ama-rafters efakwe eduze komunye nomunye, umnini wendlu cishe kuzodingeka enze amawindi ahlele. Yiqiniso, zibiza kakhulu kunezingqinamba. Kodwa-ke, abanikazi be-cottage kuzodingeka bachithe ngaphansi kokusebenzisa kabusha uhlaka lwephahla.
Izinkampani ezikhiqiza isibhakabhaka, kukhona inani elikhulu. Lapho ukhetha imiklamo enjalo kumkhiqizo womkhiqizi, kuyadingeka ukuba unake. Okuthandwa kakhulu ezweni lethu, ngokwesibonelo, amafasitela e-attic "Velux". Le nkampani ikhiqiza izinhlobo zombili zamapulangwe nezeplastiki. Ukulinganisa kwamafasitela ephahleni eVelux ngokuvamile kuvamile. Ububanzi bezinhlobonhlobo zabo ngu-78, 94 no-114 cm. Kukhona amawindi "Velux" angu-55 cm emakethe. Ukuphakama kwamamodeli kufana no-78-160 cm.
Futhi amawindi e-brand "Fakro" athandwa kakhulu phakathi kwabanikazi bezindlu ezizimele. Amamodeli alo mkhiqizi ahluke kuphela izinga elihle futhi elihle ukusetshenziswa, kodwa futhi nezindleko eziphansi kakhulu (kusuka kuma-ruble ayizinkulungwane ezingu-8.). Ukulinganisa kwamafasitela e-dome "i-Fakro" ngokuvamile kuvamile kuphela. Kuthengiswa kungenzeka ukuhlangabezana namamodeli ngobubanzi kusuka 55 kuya 114 cm.
Izinhlobo zokugaya izingilazi zeglasi
Ngaphandle kwepharamitha elinjalo njengosayizi wamafasitela e-attic, uma uthenga, kufanelekile ukunaka futhi ngezinga lokungasebenzi kwabo. Kuthengiswa namuhla kunezinkomba zombili izibuko ezintathu. Okukhethwa kwesibili ngesimo sezulu saseRussia kuthathwa njengokufanelekile. Kulesi simo, abanikazi bama-cottage eSiberia nase-Urals bangcono ukunaka amafasitela "afudumele" amabili anesigqebhezana (enefilimu ekhethekile yokubukisa).
Amafasitela aseMansard, ubukhulu namanani awo ahlukile, angashintsha kakhulu ingaphandle yesakhiwo. Ngakho-ke, yiziphi izinto ezifakwe amafomu azo, ukubuka ukuthenga, okuyiqiniso, kuyakufaneleka. Ukwakheka kwekhenikhali noma izitini, amafomethi amafasitela e-PVC afaneleke kakhulu. Kulokhu, qaphela umbala wamafrimu. Ama-Windows kufanele ahlangane ngokomzimba ibe yindlu yokwakha.
Ukuze kwakhiwe isakhiwo esiqoshiwe noma esivikelwe, kubalulekile ukubheka izakhiwo ngamapulangwe enkuni. Ungagcina bese ukhetha amawindi wepulasitiki. Kodwa-ke, kulokhu kungcono ukuthenga amamodeli anezimele ezibomvu, beige noma "ngaphansi kwesihlahla".
Izinhlobo zamafasitela ngendlela yokuvala
Izakhamuzi ezidumile kakhulu eRussia izakhamuzi zasehlobo ziyizakhiwo eziphakathi kwe-mansard. Iqabunga lamafasitela anjalo kuphela. Ngesikhathi esifanayo ivula ngokuzungeza i-axis yayo. Isisindo sefasitela elinjalo senziwa ngamalokhi aphakathi. Ngakho-ke, kulula kakhulu ukuyilawula. Umnikazi wendlu udinge ukushintshanisa leli qabunga kulezi zikhonkwane.
Amafasitela alezi ezihlukahlukene azithandwayo hhayi kuphela ekusebenzeni okusebenzayo, kodwa futhi ngenxa yokunethezeka kokunakekelwa. Ingilazi engcolile e-attic ngokuvamile ivame kakhulu. Ngamafasitela walesi sakhiwo, i-flap ingahle ijikelezwe yi-180 g futhi ihlanzwe.
Phakathi kwezinye izinto, kudayiswa namuhla:
Ukukhanya kwephahla lokubhekwa kwe-Balcony;
Imiklamo yendabuko enamathele;
Lawo ma-model-transformers ayathandwa kakhulu kune-mid-turn (ikakhulukazi ngenxa yamanani aphezulu), kodwa futhi avame ukufakwa kuma-attics. Ngefomu elinyanyisiwe banamaqabunga amabili. Uma uvula okufanayo, uthola i-attic encane "ibhaluni". Ukuze ukwandise iwindi elinjalo, udinga nje ukuphakamisa ingxenye engenhla yeqabunga phezulu (kulokhu ingilazi "uphahla" isakhiwe, kanti phansi uqhutshwa phambili.
Ukulinganisa kwamawindi e-velux "Velux", "Fakro", njll. Ibhaluni hlobo nawo ngokuvamile kuvamile. Amamodeli athandwa kakhulu kunawo wonke ububanzi buka-78 cm. Ngaphezu kwalokho, namuhla kunezinklamo ezingaphezulu kwezinto ezihlukahlukene ezidayiswayo, ekwakheni ithala lonke lapho kuvela. Ubukhulu bazo buhluka kusukela ku-94 ukuya ku-114 cm.
Awukwazi ukufaka amawindi e-balcony kunoma iyiphi i-attic. Ukufakwa kwezakhiwo ezinjalo kungenzeka kuphela ophahleni olunama-slope angama-skates okungenani angu-35 nangaphezulu kwama-degrees angu-55.
Amamodeli walokhu okuhlukahlukene ajwayele ukufakwa kuma-attics angathandeki futhi akhonze ngezinhloso zobuchwepheshe kuphela. Iqabunga lalezi zakhiwo linye kuphela. Ngakho liphakama phezulu. Ngezinye izikhathi i-polycarbonate isetshenziselwa esikhundleni seglasi ngaphakathi kwamafasitela alezi ezihlukahlukene.
Ku-attics zokuhlala, ukushaya kuphela ngokucushwa okungavamile kuvame ukuphakama. Ubukhulu balolu hlobo lwezingqimba zama-attic ngokuvamile luyingcosana. Zisetshenziselwa ngokubambisana ne "emhubheni elula" ekhethekile. Lezi zithombe zifakiwe kuphela uma kungenakwenzeka ukukhweza amafasitela avamile noma ama-swing. Isibonelo, uma kukhona isikhala esikhulu sezobuchwepheshe phakathi kophahla lwe-attic kanye nokwehla ngokwayo.
Amafasitela alezi zihlukahlukene nawo athandwa kakhulu. Ukusebenzisa izinhlobo ezinjalo zendabuko kukhululekile. Ukungahleleki kulokhu kuyinkimbinkimbi yokunakekelwa kwezibuko. Ukuze ugeze iwindi le-double-glazed kusuka ngaphandle, kuzodingeka uhudule, noma uphume emgwaqeni.
Lezi zindlela ezijwayelekile ezifakwe emagcekeni ophahleni. Eqinisweni, empeleni i-attic lezi windows azikho. Kusukela ekupheleni kwendlu ukuya ophahleni ungafaka izakhiwo kwanoma yikuphi ukuphakama nobubanzi. Ngokuvamile amafasitela e-cornice asetshenziswa njengamawindi we-panoramic. Iqiniso liwukuthi ngenxa yokwakhiwa kwe-attic, izakhiwo ezincane zalolu hlobo azikwazi ukunikeza ukukhanya okuhle.
Kubuye kwenzeke ukuthi emagqabeleni ahlanganisiwe hhayi nje amawindi, kodwa izakhiwo ze-balcony. Iphansi "emasimini" anjalo kuvame ukuqoqwa kwe-attic ngokwayo. Kodwa ngezinye izikhathi ama-balconi e-gable ayenziwa phambili. Kulesi simo, asekelwa kusuka ngezansi ngamakholomu noma izinsika.
Amafasitela anjalo abuye asetshenziswe kuma-attics futhi akwazi ukwenza umsebenzi wawo oyisisekelo wokukhanyisa ikamelo ngokuphumelelayo. Ukuhlukunyezwa kwabo kuphela yizindleko eziphezulu zokufakwa. Iqiniso liwukuthi uma ufaka amamodeli walolu hlobo, izinguquko ekwakheni uphahla kufanele zenziwe kunoma yikuphi. Amafasitela angama-vertical aphakanyiswe e-attic "birdhouse" eyakhelwe ngokukhethekile.
Okufanele kube yizesekeli
Lapha lapha nalapha kukhona amafasitela anamuhla angama-mansard (ubukhulu, izinhlobo). Amamodeli edivaysi akhiqizwa abakhiqizi abaziwayo, ezimweni eziningi, akuvumela ukuba uwasebenzise kalula. Kodwa-ke, uma ukhetha amawindi e-attic, yiqiniso, udinga ukunaka kuphela amawindi ama-double-glazed, izici zokuklama kanye nohlobo lohlaka. Qinisekisa ukuthi ubuye uhlole izinga elihle le-hardware. Ukuphatha, izikhonkwane, njll kumafasitela ase-attic ngokuvamile awafani namafasitela elula e-facade. Njengomthetho, ubuchwepheshe bokukhiqiza ukufakwa okunjalo ukwazi ulwazi oluthile futhi alukhangiswa kabanzi.
Uma ukhetha amawindi endaweni yokuqala, kufanele uqaphele isikhundla sesibambo. Ingafakwa ngenhla noma ngezansi. Zombili izinketho zibhekwa njengento elula. Uma ifasitela isendaweni ephakeme kakhulu ukusuka phansi kwe-attic, kungcono, Yebo, ukukhetha imodeli ngesibambo esincane. Uma kungenjalo, esikhathini esizayo, vula ukushintshwa, cishe, ngeke kube lula kakhulu. Uma ifasitela ifakwe i-sill window kanye nezimbiza ngezimbali ezifakiwe kukho, kufaneleka ukubuka umodeli ngesibambo esiphezulu. Kulesi simo, ungavula iwindi ngaphandle kwengozi yokuthinta nokulahla izitshalo.
Ukuze wenze amafasitela e-attic elula kakhulu ukusebenzisa, abakhiqizi abaningi banikeza ngemishini ehlukahlukene eyengeziwe. Lokhu kungaba, isibonelo, induku, intambo noma uhlelo lokuvula okude. Imodeli enezinkampani ezifanayo kufanele ithengwe uma iphezulu kakhulu esiteji.
Futhi, amafasitela alezi ezihlukahlukene angafakwa ngezindwangu ezikhethekile, izimpumputhe noma ama-roller shutters. Amanothi anjalo aphelele ehlangothini elangeni.
Kungakanani ukungena kwamafasitela ase-attic kubiza umnikazi wendlu encane? Yiqiniso, ukuze uthole i-attic enkulu, kufanelekile ukukhetha onobuhle obuningi. Ukuze uphahla oluncane, izakhiwo ezincane zingcono. Kodwa, nakanjani, kuncike kulokho okulinganiselwe amafasitela we-attic, namanani.
Ukufakwa kwamamodeli amancane amancane ngokuvamile akubizi kakhulu. I-mid-turn triplexes elula kuma-78 cm izindleko, isibonelo, cishe ama-ruble angu-15-35 ayizinkulungwane. (Ngokuya ngobuciko bokuphakama nokuklama), ama-ruble angu-25-45 ayizinkulungwane. Uma ufuna, manje ungathola nge-intanethi kanye nesimo sebhajethi samawindi afanayo. Isibonelo, ungaletha amafasitela afanayo we-Polish dormer "Fakro". Ubukhulu kanye namanani wemodeli yalowo menzi, kanye nemiklamo yanoma imuphi amanye ama-brand, ahlangene. Amamodeli amancane ka-Fakro (amasentimitha angu-55) abiza kuphela ama-ruble angu-8-10 ayizinkulungwane. Ukuze ukwakhiwa okufanayo ku-78 cm kuzodingeka ukhokhe ama-ruble angu-12-17 ayizinkulungwane. Iwindi elibanzi lalo menzi ku-94-114 cm libubanzi bama-ruble angu-15-16.
Ama-Windows "Velux" amansard, ubukhulu namanani nawo angahluka. Ibiza ngaphezu kwe-Fakro. Intengo yemodeli engu-55 cm ihluka phakathi kuka-16500-19000. Amafasitela angama-78 cm ububanzi futhi abiza ama-ruble angu-21000-24500. Intengo yokwakhiwa okubanzi ka-94-114 cm iqala kusuka kuma-ruble ayizinkulungwane ezingu-26.
I pneumothorax valve: Izimbangela, Izimpawu, Sifo Nokuselapha
Kanjani ukufunda ngokushesha ukuthatha engqondweni: ukuqeqesha ebuchosheni
Usuku lomtholampilo: imibono mayelana neholidi
Tower of London. History of the Tower of London e-London